Paths of Light Igbe Dvd - Imewe Mmewe
Satọdee 19 Juun 2021
Igbe Dvd Zọ kachasị mma iji jide ụzọ dị mkpụmkpụ ọkụ nke Zina Caramelo bụ iji hụ na DVD nwere ọmarịcha ikpe iji dakọ. Nkwakọ ngwaahịa ahụ dị ka ọ bụpịpu ya n'ọhịa ma kpụzie iji mepụta CD. Na mpụga, ahịrị dị iche iche na-ahụ anya, ọ na-apụta dịka obere osisi na-etolite n'akụkụ ikpe ahụ. Ihe eji eji osisi eme ihe na-enye aka inye ya anya di egwu. Ofzọ nke Ìhè bụ mmelite dị ukwuu site na ikpe ọtụtụ ndị hụrụ maka CD na 1990s, bụ nke na-ejikarị plastik nkịtị na ngwugwu akwụkwọ iji kọwaa ihe dị n'ime (ederede site n'aka JD Munro)
Aha oru ngo : Paths of Light , Aha ndị na-emepụta ya : Francisco Elias & Nelson Fernandes, Aha onye ahịa : Francisco Elias & Nelson Fernandes.
Tọọzdee 17 Juun 2021
Poise Oriọna Tebụl A Na-Agbanwe Agbanwe Satọdee 19 Juun
Memento Imeghe Akwụkwọ Ozi Fraịdee 18 Juun
Exxeo Piano Ngwakọ Okpokoro Tọọzdee 17 Juun
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Satọdee 19 Juun
Chepụta akụkọ mgbe ochie Fraịdee 18 Juun
Nhazi nke ubochi Tọọzdee 17 Juun
Onye rụrụ ụbọchị Wenezdee 16 Juun
Otu mmebe nke ụbọchị Tiuzdee 15 Juun
Igbe Dvd Francisco Elias & Nelson Fernandes Paths of Light